शीर्ष6यात्राको लागि युरोपमा स्लीपर ट्रेनहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > शीर्ष6यात्राको लागि युरोपमा स्लीपर ट्रेनहरू
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्वीडेन, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 28/08/2020)
के तपाईं कहिल्यै यो ताक गर्न कस्तो महसुस छक्क परे छ, विस्तृत-आँखाहरू, द्वारा दुनिया भुमरी रूपमा ठूलो तस्वीर Windows बाहिर? एक रेल को स्थिर Rocking द्वारा निद्रामा गर्न lulled बारेमा कसरी यो एक ट्रयाक तल trundles रूपमा? रेल यात्रा युरोपभरि यातायातको एक धेरै साधारण विधि हो, र त्यसो गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को शायद एक ताजा स्थिति रेल मार्फत छ. यी रेलका, जो सामान्यतया ढिलो अपरान्ह मा र रात मार्फत यात्रा को लागी लिन्छ, मानकबाट धेरै फरक अनुभव प्रस्ताव गर्नुहोस् ट्रेन यात्रा अनुभव. हामी सँगै तपाईं को लागि युरोप मा सबै भन्दा राम्रो ताजा स्थिति रेल भेला गर्नुभएको. इटाली ले फ्रान्स, यहाँ छवटा शीर्ष यूरोपियन रातको रेलहरू छन्.
रेल परिवहन भएको इको-मैत्री मार्ग यात्रा हो. यस लेखमा द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ एक ट्रेन सेव, सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट विश्व मा.
शीर्ष ताजा स्थिति ट्रेन 1: Milan To Palermo
यदि तपाईंले कहिल्यै इटालियन ग्रामीण इलाकाको अनुभव गर्ने सपना देख्नुभएको छ, यो ताजा स्थिति रेल त्यसो गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को छ. हुनत रेल यात्रा सुरुबाट समाप्त हुन बीस घण्टा लाग्छ, रेल प्रत्यक्ष छ र त्यहाँ ताजा स्थिति केबिन लागि विकल्प को एक किसिम हो. टिकट Thello मार्फत उपलब्ध पनि छन्, जसले भेनिसको लागि टिकट पनि सञ्चालन गर्दछ.
तपाईं पैसा बचत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक चार व्यक्ति कोफेट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, मिनी ताजा स्थिति विकल्प को एक प्रकारको रूपमा जो कार्यहरु. तथापि, तपाईंले केही गम्भीर बन्द-आँखा प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं साथीहरूको साथ तीन व्यक्ति क्याबिन विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ – वा अपरिचित, र टिकट अन्तर्गत खर्च हुनेछ 50 यूरो. एक downright सम्झौता हो! तपाईं अझ डिलक्स अवस्था छ खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि असी यूरो अन्तर्गत लागि एक ताजा स्थिति आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं कुनै पनि सलंग्न सुविधाहरु पाउनुहुनेछ बेला, तपाईं तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यको लागि शान्तिमा निद्राको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ.
यो यात्रा इटाली को एक विशाल swath देख्नुहुन्छ, यो देशको बुट को टिप गर्न मिलान सबै तरिका तपाईं लिन्छ रूपमा. बाटोमा तपाईं समुद्रीतटको विशाल भिस्टा र टस्कनीको पहाडहरू पाउनुहुनेछ. यो हो, को पाठ्यक्रम, रोम र यसको ईतिहासको संगमरमरको मूर्तिहरु बाहेक.
शीर्ष ताजा स्थिति ट्रेन 2: ज्यूरिख टु हैम्बर्ग
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो ताजा स्थिति रेल लागि हाम्रो दोस्रो छान्ने ज्यूरिख चालु भएको छ, हैम्बर्ग गर्न स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी. If you’re looking forasleeper train service, तपाईं Nightjet विचार गर्न छौँ. जबकि यो रेल लागि धेरै ननस्टप विकल्प उपलब्ध छन्, के तपाईं परिवर्तन दिन्छ कि एक मार्ग मार्फत जाँदै विचार गर्न सक्नुहुन्छ. को देहात सुन्दर छ, र ट्रेन meanders माध्यम असंख्य साना गाउँहरू बाटो साथ, हानोवर शहर सहित. यी शहरहरू तपाईंले समय छ भने आफ्नो यात्रा मा राम्रो तरिकाले लायक एक स्टप छन्. नबिर्सनुहोस् शानदार दृश्य Alps को तपाईं या त अनुभव गर्न सक्षम हुनुहुनेछ.
अझ राम्राे, तपाईं हैम्बर्ग आफ्नो बाटो बनाएको एकपटक तपाईं बर्लिन देखि एक छोटो दूरी हुनुहुन्छ. हालको जर्मन राजधानी यसको हिप नाइटक्लब र हिपस्टर संस्कृतिमा यसको पूर्ण समर्पणको लागि परिचित छ. सडक कलाको मजा लिनुहोस् र राम्रो कफीको बखत तपाईं बर्लिन पर्खालको भित्ताचित्रहरू अवश्य चिन्ता गर्नुहुन्छ.
शीर्ष ताजा स्थिति ट्रेन 3: Brussels To Vienna
को ब्रसेल्स भियना गर्न युरोपेली ताजा स्थिति रेल अस्ट्रिया गर्न बेल्जियम जडान एक लोकप्रिय मार्ग छ. तपाईंले छनौट गरेको रेलमा निर्भर गर्दै, यो अपरान्ह दिउँसोबाट चल्छ र बिहान सबेरै आउँछ, र यो चौध घण्टा छ’ घुम्ने समय. यो धेरै भन्दा पेट गर्न सजिलो छ, भन्न, मिलानबाट पलेर्मो मार्गमा रातको रेलको लागि आवश्यक बीस घण्टा.
यस्तो छोटो रेल यात्रा को लागि समय को राशि संग, तपाईं भोजन कार मा overlong Linger गर्न आवश्यक छैन, यद्यपि तपाईं निश्चित रूपमा विभिन्न वर्गहरू द्वारा प्रदान गरिएको सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ.
एक पटक तपाईं भियनामा भएपछि सक्नुहुन्छ सही कफी संस्कृतिको अनुभव लिनुहोस्, भियनाले आफूलाई युरोपेली कफीको केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेको छ.
शीर्ष ताजा स्थिति ट्रेन 4: लन्डन गर्न एडिनबर्ग
यो प्रसिद्ध मार्ग प्रति हप्ता पटक चल्छ. पनि Caledonian ताजा स्थिति भनिन्छ, लागत प्रभावकारिता यो ताजा स्थिति सेवा मिक्सहरू लक्जरी. तपाईं खाना समावेश सम्झौताहरू पाउन सक्नुहुन्छ, पेय, र पाठ्यक्रम, सुत्ने केबिनहरू.
तपाईं आफ्नो यात्राको समयमा लन्डन भ्रमण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सधैं मुख्य भूमि युरोप बाट Eurostar लिन सक्नुहुन्छ. यो फ्रान्स ले इङ्गल्याण्ड गर्न च्यानल मार्फत यात्रा गर्न एक लागत प्रभावी र सरल तरिका हो. टिकट पनि अन्य स्थानहरूमा उपलब्ध छन्, एम्स्टर्डम जस्तै.
तपाईं यो मार्ग छनोट गर्न एउटा कारण खोज्दै हुनुहुन्छ भने, याद गर्नुहोस् कि एडिनबर्ग हो ह्यारी पॉटरको घर, जेके Rowling को famed सिर्जना. तपाईले उच्च पहाडहरूमा रूटिंग पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो फोर्ट विलियम रूपमा, कि प्रामाणिक स्कटिश अनुभवको लागि. यो हाम्रो लागि काम गर्दछ!
माननीय वर्णन 5: पेरिस गर्न म्यूनिख
जबकि यो यात्रा प्राविधिक रूपमा स्लीपर ट्रेन मार्गको रूपमा योग्य छैन, किनभने यो पूर्ण निद्रा सीटें समावेश गर्दैन, यो दैनिक धेरै मार्गहरू चल्दछ.
को पाठ्यक्रम, पेरिस रोशनी शहर र संसारको सबैभन्दा रोमान्टिक शहर मध्ये एक छ, त्यसैले यसलाई बिल्कुल युरोपेली छुट्टी मा एक स्थान स्कोर. यसले आफ्नो पहिलो यात्रा वा आफ्नो hundredth छ कि साँचो हो.
यसैबीच, म्यूनिख Oktoberfest घर छ. यो पर्व सबै समय मेरो मनपर्ने हुन हुन्छ – यो हजारौं को एक riotous घटना हो. प्रति वर्ष उपस्थित हजारौं र गतिविधिहरु को एक बहुतायत चयन गर्न जो देखि संग, म्यूनिख तपाईंको सूचीमा एक स्थानको लायक छ.
माननीय वर्णन 6: Copenhagen To Berlin
यो कारणले अस्तरीय ताजा स्थिति रेल अनुभव गर्न अर्को आदरणीय उल्लेख छ, तर यो समयको लागि लायक हो किनकि तपाईं युरोपको केही सुन्दर भूभागहरू आफैंलाई फेला पार्न पाउनुहुनेछ. डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई प्रभाव र मुख्य भूमि युरोपेली संस्कृति को एक अद्वितीय मिश्रण छ र छुटेका गर्न छैन. रूटिंग पनि धेरै निकट सुरु हुन्छ मैल्मो, जुन भेट्न एक रमणीय शहर हो र स्विडेनमा तेस्रो ठूलो हो.
तपाईं यो रेल मा पूर्ण निद्रा बर्थ पाउनुहुनेछ बेला, तपाइँले दैनिक रातको रूटिंग उपलब्ध पाउनुहुनेछ. यी राति तपाईं छोडेर आउन दिन को लागि ताजा बिहान पुग्नु गर्न अनुमति दिन्छ. एक गैर-ताजा स्थिति रेल संग सबै भन्दा राम्रो अनुभव लागि, तपाइँ प्रथम श्रेणी टिकट आरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ. यी टिकट त्यस्ता अतिरिक्त सामान रूपमा वृद्धि भत्तों साथ, समावेश खाना, र अधिक निजी केबिन अनुभव.
जब यात्रा युरोप रेल बाट तपाइँ छनोटको लागि बिग्रिनु भयो. यो स्कटल्याण्ड वा स्पेन हो कि, नर्वे, वा स्वीडेन, ताजा स्थिति रेल सबै भन्दा राम्रो सेवा केही वरिपरि अर्को बिहान आइपुगेपछि लागि हो ताजा र आफ्नो दिन आउन लागि तयार. के तपाईं उपलब्ध विकल्प अधिकता छ जबकि, जस्तै ट्रेन होटल वा रातरात स्लीपर ट्रेनहरू लामो प्राग, पोल्याण्ड, लिस्बन वा मास्को, आफैलाई एक अनुमोदन गर्न र सट्टा युरोप यी छ शीर्ष ताजा स्थिति रेल मारा. तपाईं खेद छैन!
रात र द्वारा यात्रा तपाईंको स्लीपर ट्रेनहरू बुक गर्नुहोस् एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “शीर्ष6यात्राको लागि युरोपमा स्लीपर ट्रेनहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsleeper-trains-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
निम्न लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- यो लिंक अंग्रेजी मार्गहरू अवतरण पृष्ठ लागि हो, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, र तपाईं एएस fr वा डे र तपाईंको छनौटको अधिक भाषाहरूमा प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ.
#nighttrain EuropeTraveling NightTrains SleeperTrains रेल यात्रा